Dowladda Soomaaliya oo eedeyntii ugu weyneyd u jeedisay Deni iyo Axmed Madoobe - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo eedeyntii ugu weyneyd u jeedisay Deni iyo Axmed Madoobe
Iyada oo aan weli wax heshiis ah laga gaarin Arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa Xukuumadda xilgaarsiinta waxaa ay ku eedeysay Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland inay kasoo horjeedaan doorasho ka dhacda dalka.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in Xukuumadda ay dadaal farabadan ku bixisay sidii ay dalka uga dhici laheyd doorasho xor iyo xalaal ah, hayeeshee la hor istaagay.
Waxaa uu sheegay Wasiir Al-Cadaala in Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland iyo dad kale ay u muuqdaan kuwo aan diyaar u aheyn doorasho ka dhacda dalka, isla markaana, iyaga oo Muqdisho ku sugan ay diideen inay kasoo qeyb galaan shirka lagu dhameystirayay heshiiskii 17-kii September, kaas oo uu ku dhawaaqay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Hadalka Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa kusoo aadaya xilli weli la isku mari la’yahay doorashada Soomaaliha, balse ay Beesha Caalamka wado dadaalo ku aadan sidii xal loo gaari lahaa.
Previous articleKhasaaro ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho
Next articleFarmaajo oo lagu eedeeyay in uu hor istaagay wadda kasta oo lagu gaari karo doorasho